7 Mitambo uye Zvishandiso Mahara kune Yakatemwa Nguva (Ndira 18) | IPhone nhau
7 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 18)
Isu tave kusvika pahafu yepakati pevhiki, iyo nguva iyo kusashivirira kweChishanu kusvika uye isu tichichengeta basa kunotanga kuwedzera. Kuita kuti kumirira kutakurike, nhasi tinokuunzira sarudzo nyowani ye mitambo uye mafomu anobhadharwa, asi ikozvino iwe unozogona kuve pane yako iPhone kana iPad zvachose mahara.
Rangarira kuti zvese kushambadza uye zvinopihwa zvandiri kuenda kuzokuratidza pazasi ndeizvi Nguva Yakatemwa, ndiko kuti, ini ndinogona kungovimbisa chete kuti ndezvechokwadi panguva yatinoburitsa ichi posvo, asi handizive kuti vachazobviswa riini nevanoenderana vanogadzira. Saka, uchifunga kuti vakasununguka, download kutanga uye funga gare gare. Asi kurumidza !!
1 Piano Shamwari Chords uye Zviyero
2 Princess Mitambo
3 Huru Bofu: Buddy Kununura
4 PhotoJus Grunge FX Pro - Pic Mhedzisiro ye Instagram
6 Denderedzwa re5ths Master, 2nd Edition
7 Cloud Hub - File Manager, Gwaro Reader, Bhurawuza
Piano Shamwari Chords uye Zviyero
Kana iwe uchiziva uye uchida kutamba piyano, ichi ndicho chimwe cheaya mafomu auchazoda. «Piano Shamwari ishamwari inonakidza yekuve nayo uchiridza piyano«. Kutenda kuapp iyi, unogona nyore uye nekukurumidza kutsvaga "piano chords, piano scales, staff notes uye kuwana metronome yakasimba, zvese zvine interface nyore kushandisa."
Mutengo wakajairika we Piano Shamwari Chords uye Zviyero Iyo 0,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Kunyangwe ndakapfupisa, sezvamuchaona pazasi ndinofunga kuti ine zita rakareruka zvaigona kunge zvakaringana kutsanangura izvi dambanemazwi based princess mutambo inova yechikamu chedzidzo uye yakanangana nekadiki imba, vakomana nevasikana kusvika pamakore mashanu ekuberekwa.
Batsira muchindakadzi kuvaka yemashiripiti yekufungidzira nyika. Sezvo chiitiko chega chega chinowonekera, mavara matsva anopindirana uye zvinhu zvinowoneka!
Mutengo wakajairika wemutambo wekudzidzisa uyu ma2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose, kwenguva pfupi.
Huru Bofu: Buddy Kununura
Mumutambo uyu iwe uchafungidzira hunhu hwehuku hwave hwakatorwa nezvikara. Uchakwanisa kupunyuka, asi zvakare unofanira kubatsira vamwe shamwari dzako huku kutiza omugungwa kuti vari kubatwa.
Mutengo wakajairika we Huru Bofu: Buddy Kununura Iyo 0,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
PhotoJus Grunge FX Pro - Pic Mhedzisiro ye Instagram
Ino nguva tinowana yemapikicha ekugadzirisa app iyo inotibvumidza isu kuti wedzera grunge mhedzisiro yakagadzirwa nehunyanzvi vafotori uye maartist kumifananidzo yedu kuitira kuti vataridzike zviri nani pa Instagram kana mamwe masocial network.
Mutengo wakajairika we MufananidzoJus Grunge FX Pro Iyo 2,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
With iyi app dzidza iwo mabhesiki emutauro wehypertext markup uye macascading machira emhando.
Mutengo wakajairika we Webhu Dhizaini Basics - HTML neCSS Code Iyo 0,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Denderedzwa re5ths Master, 2nd Edition
Mutengo wakajairika we Denderedzwa re5ths Master, 2nd Edition Iyo 1,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Cloud Hub - File Manager, Gwaro Reader, Bhurawuza
Cloud Hub chishandiso chinoshanda chinokutendera iwe batanidza ese ako ekuchengetedza masevhisi mune imwechete app.
Uine Cloud Hub unogona kurodha pasi uye kurodha mafaera kuBhokisi, Dropbox, OneDrive, Dhiraivha, iCloud, pamwe ne «gadzirisa mafaera ese emuno akachengetwa muchishandiso: rename, fambisa, teedzera, dzima, gadzira madhairekitori, tarisa zvirimo zvemhando Mafomu akajairika mafomati senge PDF, PNG, JPG, MP4, iWork, MS Office mafaera ».
Uye zvechokwadi, iwe unogona zvakare kugovera ako mafaera kuburikidza nesocial network senge Facebook, Twitter, nezvimwe.
Mutengo wakajairika we Cloud Hub - File Manager, Gwaro Reader, Bhurawuza Iyo 0,99 euros zvakadaro ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara, kwenguva yakaganhurirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » 7 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 18)
Yekutanga Android Wear 2.0 wachi inotora iyo Crown Dhijitari kubva kuApple Watch
Evernote inowana kumhanya neshanduro yayo nyowani